ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix TV Show ပြသခြင်း - WHAS: စခန်း၏ပထမနေ့ - Netflix မူရင်း
ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix ရုပ်ရှင် Pick: Staten ကျွန်းနွေရာသီ သြဂုတ်လ 2015 Netflix ကနေဒါတွင်အသစ်ကဘာလဲ Netflix မူရင်း က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
Netflix တီဗွီအစီအစဉ်ပြသမှု - သြဂုတ် ၂-၉
Netflix ရဲ့မူလစီးရီး စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix TV Pick!
ငါကရက်သတ္တပတ်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး Netflix TV Pick မဟုတျကွောငျးကိုသိပေမယ့်ယခုအပတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်သောအခြားတီဗီရှိုးရှိပါတယ်။ အားလုံးအကြောင်းပါ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမဆုံးနေ့!
David Wain နှင့် Michael Showalter မှဖန်တီးသည်၊ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမနေ့ Wain နှင့် Showalter ၏ 2001 အစွန်းရောက်ဂန္ရုပ်ရှင်မှ prequel ဖြစ်ပါတယ် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ ၎င်းသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်စခန်းမီးသတ်တပ်စခန်း၏နောက်ဆုံးနေ့တွင်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း စခန်းပထမနေ့ ရုပ်ရှင်ထဲကနေသရုပ်ဆောင်တစ်ခုလုံးနဲ့ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးပြပွဲအတွက်ပြန်လာကြတာပါပဲ။ ဂိုဏ်းတစ်ခုလုံးပြန်ရောက်သွားသည်။ Bradley Cooper၊ Amy Poehler၊ Paul Rudd, Janeane Garofalo, Michael Ian Black, Ken Marino, Joe Lo Truglio, Christopher Meloni, Molly Shannon, Elizabeth Banks, H. Jon Benjamin, Orth, အေဒီ Miles, Marguerite Moreau, Marisa Ryan, Michael Showalter နှင့် Kevin Sussman တို့ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးထဲကရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူမျိုးအချို့လည်းပါ ၀ င်ပါတယ် စိုစွတ်သော မိသားစု ၀ င်များဖြစ်သည့် Jon Hamm၊ Kristen Wiig၊ Bell Bell၊ Jason Schwartzman၊ Chris Pine, Randall Park နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
စီးရီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းကရယ်စရာကောင်းတယ်။ ဟာသအားလုံး - ဟုတ်တယ်၊ အားလုံး - ကြောက်မက်ဘွယ်ပါ။ ဒါဟာ၏ပရိသတ်များအဘို့ရုံဟာသနှင့်လွမ်းဆွတ်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောမုန်တိုင်းပါပဲ စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ, ရုပ်ရှင်။
ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ, မကြည့်ခင် စခန်းပထမနေ့ ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာအကြိမ်ကြိမ်တောင်ရိုးရိုးသားသားဆိုရမယ်။ ဒါဟာသင်ပြက်လုံးများတွင်ပါဝင်နေသည်နှင့်ထင်ရှားတဲ့ရည်ညွှန်းချက်အားလုံးကိုကောက်ယူနိုင်လျှင်ပြသတာကပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေသည်။ ရုပ်ရှင်ကိုအကြိမ် ၅၀ လောက်ကျွန်တော်မြင်ဖူးတယ်၊ ကျွန်တော်ကကိုးကားချက်တွေအားလုံးကိုပြန်ကောက်ယူနေသေးတယ် စခန်းပထမနေ့
စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ - စခန်း၏ပထမနေ့ Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။
ထို့အပြင် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီ, ရုပ်ရှင်သည် Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်တွင်ရှိသည် Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ အဖြစ်ကောင်းစွာ!
အသစ်က Charm ထွက်လာပေတဲ့အခါမှာ
လာသောအခါအရူးကြွယ်ဝသောအာရှသား Netflix ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်
Netflix 2017 ရက်တွင် 13 ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင် PG
စိတ်ကိုမုဆိုးရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ဘယ်မှာ fargo ၏ရာသီ2စောင့်ကြည့်ဖို့